Isu tinenge tave kuda kuona ceramic Apple Watch Series 5 mune nhema | Ndinobva mac
Iwo maApple Watch mamodheru atakaona kubvira zero zero akateedzana ave akawanda uye nezvinhu izvo zviitiko zveaya mawachi zvakagadzirwa futi. Mune ino kesi kudonha kwaVaWhite, mune inozivikanwa pasocial network Twitter inoratidza a Apple Watch Series 5 kesi prototype mu ceramic asi nhema muvara.
Kunge isu tine yegoridhe Apple Watch, isu takaona zvakare Apple Watch yakagadzirwa neceramic, aluminium, simbi isina simbi, nezvimwe. zvakanaka zvinoita sekudaro Chinangwa chaApple neChitsauko 5 kwaive kuvhura imwe chena uye imwe nhema zvedongo.
Iyi ndiyo tweet yakasiiwa naVaWhite nezve ino inogona wachi isina kumboona mwenje:
Apple Tarisa S5 Chinyorwa Nhema Ceramic pic.twitter.com/XgNgObxq7n
- Mr Muchena (@laobaiTD) June 16, 2021
Iyi mifananidzo yakaburitswa inotiyeuchidza zvakanyanya nezve iyo Space Nhema simbi isina kupera yeApple Watch Series 5 kuti akaona chiedza. Ichokwadi ndechekuti idzi mhando dzekupedzisa senge zvedongo, goridhe kana kunyange simbi isina simbi yakasarudzika chaizvo nekuda kwemutengo wavo wakakwira uye mune iyi kesi Apple Watch modhi ine zvedongo kesi inodhura ingangoita $ 1.300, saka Hatisi kutaura nezve wachi inowanikwa kune vese vashandisi.
Parizvino, iyo Cupertino kambani inopa Apple Watch Series 6 modhi ine titanium kesi seyakasarudzika wachi kana zvakasiyana neakajairika aruminiyamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Isu tinenge tave kuda kuona ceramic Apple Watch Series 5 nhema
Iyo HomePod mini yatotengeswa muAustria, Ireland neNew Zealand